प्रयोगका सर्तहरू - InstaZOOM
घर » प्रयोगका शर्तहरु
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाइँ घोषणा गर्नुहुन्छ कि तपाइँ यी नियम र सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ। कृपया तिनीहरूलाई ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ तिनीहरूलाई पालन गर्नुहुन्छ।
1. यो हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गर्न कानूनी छ।
2. प्रतिलिपि अधिकार सामग्रीको प्रतिलिपि गर्न अनुमति छैन।
3. यो माथि जान अनुमति छैन instazoom.mobi डाउनलोड गरिएका फाइलहरू फैलाउनुहोस्।
4. व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि तिनीहरूलाई प्रयोग गर्ने अधिकार तपाईंसँग मात्र छ।
5. हामी हाम्रो सर्भरमा के हुन्छ रेकर्ड गर्दैनौं।
6. हामी अनिश्चितकालका लागि हाम्रो सर्भरमा फाइलहरू भण्डारण गर्दैनौं।
7. डाउनलोडहरूका लागि अनुरोधहरू प्रयोगकर्ताहरू आफैंद्वारा गरिन्छ, जस्तै DMCA (डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम) वर्णन गरिएको छ।
प्रयोगका पूर्ण सर्तहरू:
यदि तपाईं instazoom.mobi प्रयोग वा चालू instazoom.mobi पहुँच, तपाईं प्रयोगका सर्तहरूसँग सहमत हुनुहुन्छ instazoom.mobi यस कागजातमा उल्लेख गरिए अनुसार। तपाईं अधिकृत हुनुहुन्न instazoom.mobi वा यदि तपाइँ यी सर्तहरू स्वीकार गर्नुहुन्न भने यसको सेवाहरू प्रयोग गर्न।
तपाइँ स्वीकार गर्नुहुन्छ कि कम्पनीले तपाइँलाई कुनै पनि समयमा र कारण नदिई प्रयोगका यी सर्तहरूमा अद्यावधिकहरू पठाउन सक्छ। वेबसाइटमा पोष्ट हुने बित्तिकै यी प्रयोगका सर्तहरूमा भविष्यका परिवर्तनहरूद्वारा बाध्य हुन पनि तपाईं सहमत हुनुहुन्छ।
यदि तपाइँ यी प्रयोगका सर्तहरू मध्ये एकमा सहमत हुनुहुन्न भने, तपाइँको सहमति स्वतः समाप्त हुनेछ यदि तपाइँ प्रावधानहरू मध्ये कुनै एक उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ। को विवेक मा instazoom.mobi यो इजाजतपत्र कुनै पनि समयमा र कारणहरू बिना समाप्त गर्न सकिन्छ।
यो पृष्ठ अन्तिम पटक जनवरी 1st, 2014 मा अद्यावधिक गरिएको थियो।
लग फाइलहरूको प्रयोग
हामी हाम्रा आगन्तुकहरूबाट कुनै पनि आईपी ठेगाना वा प्रयोगकर्ता डेटा रेकर्ड गर्दैनौं। हाम्रो वेबसाइटमा कति जना मानिसहरु भ्रमण गर्छन् भनेर हेर्नको लागि हामी Google Analytics को प्रयोग गर्छौं। http://www.google.com/analytics/tos.html
हामी विज्ञापन गर्न तेस्रो पक्ष विज्ञापन सेवाहरू प्रयोग गर्छौं instazoom.mobi विज्ञापनहरू प्रदर्शन गर्न। केही विज्ञापन सेवाहरूले हाम्रो वेबसाइटमा विज्ञापन गर्दा कुकीहरू र वेब बीकनहरू जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गर्छन्, जसले विज्ञापनदाताहरूलाई तपाईंको बारेमा जानकारी पठाउँछ। तपाईलाई तपाईको आफ्नै भाषामा विज्ञापनहरू देखाउनको लागि यो आवश्यक छ। तिनीहरूको वेबसाइटमा तिनीहरूको सेवाहरूको बारेमा थप पढ्नुहोस्।
1. आफ्नो देशमा कुनै पनि कानून नमान्नुहोस्।
2. अवैध रूपमा प्रतिलिपि अधिकार भएको संगीत डाउनलोड नगर्नुहोस्।
3. Instazoom- फाइलहरू व्यक्तिगत उद्देश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ र पास वा वितरण गर्न सकिँदैन।
तपाईं हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर यी नियम र सर्तहरूमा सहमत हुनुहुन्छ।
DMCA र हटाउनुहोस्
- यो को लागी एक सरल उपकरण हो Instazoom तस्बिरहरू विस्तार गर्न।
- हामी छवि फाइलहरू होस्ट गर्दैनौं।
- यो वेबसाइटले पाइरेटेड प्रतिलिपिहरूलाई समर्थन गर्दैन।
- हामीलाई सम्पर्क गर्नु अघि, कृपया यो पृष्ठ पढ्नुहोस्: DMCA।
- यदि तपाईं छविको प्रतिलिपि अधिकार मालिक हुनुहुन्छ र यसको रूपान्तरण रोक्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया हामीलाई इमेल पठाउनुहोस्।
हामी यी छविहरूलाई रूपान्तरण गर्न रोक्नेछौं।
यदि तपाइँसँग हाम्रो सेवाको बारेमा कुनै प्रश्न वा सुझावहरू छन् भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्: [ईमेल सुरक्षित]